Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Saint Kitts na Nevis njem njem » St. Kitts & Nevis na-emelite ndụmọdụ ndụmọdụ maka ndị njem si Brazil, India, South Africa na UK
A dụrụ ndị si Brazil, India, South Africa na UK ọdụ ka ha ghara ịga St. Kitts & Nevis n'oge a.
Ndụmọdụ njem njem St. Kitts & Nevis na-agụnye India ugbu a
Mkpebi ịgbatị ma gbasaa ndụmọdụ ahụ dabere na ndụmọdụ nke Ministry of Health
St. Kitts & Nevis ga-aga n'ihu na-enyocha ọnọdụ na-emepe emepe ma nye mmelite dịka ọ dị
St. Kitts & Nevis agbatịwo ndụmọdụ ndụmọdụ njem maka ndị njem si UK, Brazil na South Africa ruo na May 4 ruo June 4, 2021. Ndụmọdụ njem ugbu a gụnyere India. A dụrụ ndị si n'ebe ndị ahụ e kwuru n'elu aka ka ha ghara ịga St. Kitts & Nevis n'oge a. A ga-agọnahụ ịbanye na Federation. Mụ amaala na ndị bi na St. Kitts & Nevis ndị na-esite na nke ọ bụla n'ime obodo ndị a ga-ahazi arịrịọ njem ha site na ntanetị www.knatravelform.kn a ga-achọrọ ha iche iche ruo ụbọchị iri na anọ mgbe ha rutere, ọ bụrụgodi na agbaala ha ọgwụ zuru oke.
Mkpebi ịgbatị ma gbasaa ndụmọdụ ahụ dabere na ndụmọdụ nke Ministry of Health na gọọmentị nke St. Kitts & Nevis gosipụtara site na National COVID-19 Task Force maka ọdịmma nke ichebe ókèala ya na ahụike nke ụmụ amaala ya . Gọọmentị na-agbatị ndụmọdụ ahụ na nzaghachi nke Covid-19 dịgasị iche iche sitere na UK, Brazil na South Africa na ọnụ ọgụgụ zuru oke nke COVID-19 na-ahụ ugbu a na India. Federation nke St. Kitts & Nevis ga-aga n'ihu na-enyocha ọnọdụ na-emepe emepe ma nye mmelite dịka ọ dị.
Ndị njem kwesịrị ịdị na-enyocha mgbe niile St. Kitts Tourism Authority (www.stkittstourism.kn) na Nevis Tourism Authority ()www.nevisisland.com) weebụsaịtị maka mmelite na ozi.